Ị na-atụ anya na akwa nhicha na ịkwado: ụzọ, nkọwa. Ọhụụ Christmas na-akọ na ọhụụ na-akọ banyere akwa akwa
Unidentified Ịgba afa
Ọkọlọtọ Krismas - ịkọ ọhụụ na akwa akwa na nwoke
Krismas bụ oge ezumike na-egbuke egbuke. Oge ememe, ekpere, nkwekọrịta, ihe ịrịba ama. Ọ bụ n'oge Krismas ka ememe ịhụnanya - ịkọ ọhụụ na ịhụ ịhụnanya dị ike, n'ihi na Krismas jupụtara ike nke nghọta, mgbaghara na ịhụnanya. Ịchọpụta na akwa nhicha na agbamakwụkwọ a bụ ọdịnala nke Afọ Ọhụrụ, na-anọchite anya ịdị ọcha ime mmụọ nke ndị Russia. Nke a bụ ohere kachasị mma iji mee ka ịhụnanya ọhụrụ dị ọhụrụ, ịlaghachi azụ ma ọ bụ ịmụta banyere atụmanya alụmdi na nwunye n'afọ na-abịanụ.
Onyinye Christmas na-eji akwa akwa
Were akwa na-acha ọcha (nke ọhụrụ na nke dị ọcha!), N'abalị nke Krismas, kwụpụ ya na windo wee kwuo, sị: "Nwunye m kwadara, abata na akwa akwa na akwa akwa." Na ụtụtụ ụtụtụ ma ọ bụrụ na akwa akwa ahụ akpọnwụ - a gaghị enwe agbamakwụkwọ na afọ ọhụrụ ahụ. Ọ bụrụ na mmiri - ị nwere ike ịkwadebe maka ememe ahụ, nwoke ahụ na-alụ nwanyị ọhụrụ na-aga "n'okporo ụzọ."
Ịmacha oriọna, ákwà nhicha na enyo
Mgbe abalị iri na abụọ na oge Krismas na-ezo n'ime ụlọ na-enweghị ihe ọ bụla, na-ewere ha na-acha ọcha na-acha ọcha, ọkụ ọkụ na chọọchị na obere enyo. Kwuo okwu ndị a: "M kwadara m, bịa soro m rie nri abalị." Ihe dị ka nkeji ise tupu ọdịdị nke ọkụ ọkụ na-egbuke egbuke ga-amalite n'anya. N'oge a, ị ga-ehichapụ mirror na akwa akwa. Tụlee ọdịdị nke onye a mara ikpe na mirror, gafee onwe ya na obe ma kwuo okwu nsị: "Chur nke ebe a". Nwoke ahụ na-alụ nwanyị ọhụrụ ga-apụ n'anya. Ihe odide oge gara aga na-ehicha akwa:
mechie oghere na akwa nhicha. Ọ bụrụ na mmadụ abịa na nrọ, akwa ahụ ga-ewe, nke ahụ bụ nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ;
tinye "tebụl dị ọcha" otu iko, nri, agịga, ọkụ. Mechie ihe niile na akwa akwa ọcha Iji weputa otu ihe: iko mmanya ahụ na-egosi di onye aṅụrụma, agịga - onye na-akwa akwa, achịcha - di na-arụsi ọrụ ike, egwuregwu - ihe nkwụcha;
na-asacha na mgbede, hichaa ihu ya na akwa akwa, zoo n'okpuru ohiri isi. N'abalị, onye ọbịa ahụ ga-arịọ maka akwa akwa.
Mmụọ na ememe Krismas
Omume ịhụnanya a na-eme na Svyatki na-enye gị ohere imeri nsogbu obi gị ngwa ngwa, ịmepụta ndụ onwe gị iji dọta ịhụnanya nke ụtọ. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na a na-ele ịhụnanya anya dịka ihe ize ndụ ma sie ike, ọ dịghị ihe egwu ga-eme, ihe bụ isi bụ ikwere n'enweghị ihe ọ bụla n'ime onwe gị ma ghara ịtụ egwu agha ndị ọzọ ị nwere ike izute na usoro ahụ. Egwurugwu Krismas na mgbidi Ekepụtara iji "kee" onye ị hụrụ n'anya. N'abalị nke Jenụwarị 7, were nkedo osisi, jide ntutu isi gị wee kwuo, sị: "Ntutu isi na ntutu isi, na ntụrụndụ (aha) nye m. Amen. " Tinyegharịa nkata ahụ ugboro 9, na-enweghị ịkwụsị iji dochie ntutu gị. Mgbe nke ahụ gasịrị, tinye ihe mgbochi ahụ n'okpuru isi okwute ma gaa ụra. Na ụtụtụ wepụ ntutu site na mgbochi ma gbaa ya ọkụ. Na-ekwo ekpuchi n'ime ihe oriri na-atọ ụtọ.
Privorot na enyo Kedu kpọmkwem n'elekere 12 nke ụtụtụ na Christmas Eve iji dụnye akwa ákwà akwa na tebụl, na etiti iji wụnye enyo, n'akụkụ ya - 2 ọkụ kandụl. Tupu enyo, tinye foto nke onye ị hụrụ n'anya n'ụzọ dị otú a na-egosi na foto a na enyo. Na-eche banyere ihu ọma ma na-asị: "Ọchịchịrị abalị na-enyere m aka, ike m na-eduzi m na spinner. Ntughari okwu okwu na-eburu, na onye a hụrụ n'anya (aha) doneshi. M na-enwu oriọna, na-enwu ọkụ, na-enwu ọkụ. Ndi m'huru n'anya, choo m, cheta m, biakutem ngwa ngwa, me ka ihu gi buru ngwa ngwa. Ka o mezuo, dika edere ya. " Mgbe ememe ahụ gasịrị, tinye foto ahụ na enyo, kechie ya na ákwà oji ma zoo ùkwù ahụ n'ọnụ ụzọ. Ịhụ na akwa nhicha na onye nlekọta na ịchọrọ mmasị na-adọrọ mmasị maka ịchọta onye ọkpọ, ime ka mmekọrịta gị na onye ị hụrụ n'anya dịkwuo mma. Oge kachasị mma maka ịkọ nkọ bụ ụtụtụ n'isi ụtụtụ ma ọ bụ mbubreyo mgbede.
Otu esi kọwaa aka mgbe ị lụrụ di na nwunye: Nkuzi nke palmistry
Onye na-ekwu banyere mmiri n'oge Krismas na Christmas
Ịgba afa na Krismas: otu esi enye enyi gị nwanyị aka
Mee nchọpụta nke ọma site na ekwentị
Agba afa nke afọ ọhụrụ na ihe ịrịba ama si n'aka ndị amoosu na-eketa maka obi ụtọ, akụ na ụba na alụmdi na nwunye
Ịgba afa site na Krismas na kandụl
Ekele na ụbọchị onye na-akwụ ụgwọ - mara mma ma na-adọrọ mmasị, na nkọwa na n'amaokwu. Kwadoro onye isi akuko nke ndi otu, ndi otu ndi nwoke na ndi nwanyi
Nkeji nke ọnwa: olee otú ọ ga - esi kwe omume
Garik Kharlamov na-atụghị anya na nleta na Kadyrov, foto
Kedu ihe Ribbon St. George? Esi esi mara mma
Kedu ka esi tufuo agba aja aja?
Ndụ onwe onye nke Regina Todorenko taa: akụkọ ọhụrụ
Mmiri bịara: "azure" ọla nchịkọta Pandora March 2017
Cutles kụrụ na mushrooms
Ichebara okwu a echiche - ma enwere ịhụnanya
Nghahie nke ụmụ nwanyị na nkwurịta okwu na ụmụ nwoke
Kedu ka esi mee ka ulo mara mma ma mara mma?
Tina Kandelaki, ònye ka ọ bụ?
Mesotherapy: chekwaa mgbazi
Ụdị oge a n'ime imewe ime
Esi họrọ mahadum kwesịrị ekwesị
Iri nri bu ihe kwesiri ntukwasi obi.